စျေးပေါသောတာရှည်ခံသည့် Disc Organic & Compound Fertilizer Granulator စက်နှင့်မြင့်မားသော granulation နှုန်းပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံများ | YiZheng
Disc / Pan Organic & Compound Fertilizer Granulator ဆိုတာဘာလဲ။
ဒီစီးရီး disc ကို granulating ဆေးကြောထားသောပါးစပ်သုံးချောင်းဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်၊ လျှော့စက်နှင့်မော်တာသည်ချောချောမွေ့မွေ့စတင်ရန်၊ သက်ရောက်မှုအားနှေးကွေးစေရန်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ၏သက်တမ်းကိုတိုးတက်စေရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောခါးပတ် drive ကိုအသုံးပြုသည်။ သံမဏိပြားများပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ခိုင်ခံ့စေသည်။ ၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်ပြီးထူထဲ၊ လေးလံ။ ခိုင်ခံ့သောအခြေခံဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ခိုင်မာသောကျောက်ဆူးချပ်များနှင့်ချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိချေ။
အပူချိန် ၃၅ ဒီဂရီမှ ၅၀ ဒီဂရီညှိနိုင်သည်။ ဒယ်အိုးသည်လျှပ်စီးအားဖြင့်မော်တာမှမောင်းနှင်သောအလျားလိုက်ဖြင့်အချို့သောထောင့်အတိုင်းလှည့်သည်။ အမှုန့်အမှုန့်နှင့်ဒယ်အိုးအကြားပွတ်တိုက်အောက်မှာလှည့်ဒယ်အိုးနှင့်အတူထမြောက်တော်မူမည် အခြားတစ်ဖက်တွင်, အမှုန့်ဆွဲငင်အားအောက်မှာလဲကြလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အမှုန့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ centrifugal အင်အား၏ဒယ်အိုးအစွန်းမှတွန်းသည်။ အမှုန့်ပစ္စည်းများသည်ဤစွမ်းအားသုံးခု၏အောက်တွင်သဲလွန်စအချို့ရှိသည်။ ဒါဟာတဖြည်းဖြည်းလိုအပ်သောအရွယ်အစားဖြစ်လာသည်, ပြီးတော့ဒယ်အိုးအစွန်းအားဖြင့်လျှံ။ ၎င်းသည်မြင့်မားသော granulating မှုနှုန်း၊ ယူနီဖောင်းအမှုန့်၊ မြင့်မားသောစွမ်းအား၊ လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှု၊
ဒြပ်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာစီမံခန့်ခွဲနည်း Disc Organic & Compound Fertilizer Granulator အသုံးပြုခြင်း
1.Raw ပစ္စည်းပါဝင်ပစ္စည်းများ: ယူရီးယား, ammonium နိုက်ထရိတ်, ammonium ကလိုရိုက်, ammonium ဆာလဖိတ်, ammonium ဖော့စဖိတ် (monoammonium ဖော့စဖိတ်, diammonium ဖော့စဖိတ်နှင့်ကြမ်းသောအဖြူရောင်, ca), ပိုတက်စီယမ်ကလိုရိုက်, ပိုတက်စီယမ် sulfate နှင့်အခြားကုန်ကြမ်းအချိုးအစားညီမျှမှု (အရသိရသည်သည်) စျေးကွက်ဝယ်လိုအားနှင့်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ၏န်းကျင်မြေဆီလွှာ) ။
2.Raw ပစ္စည်းများရောနှော: အ granules ၏တူညီသောဓာတ်မြေသြဇာထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ပါဝင်ပစ္စည်းများအရောအနှောရောထွေးရပါမည်။
ကုန်ကြမ်း ၃.Granulation: ညီမျှသောရောနှောပြီးနောက်ကုန်ကြမ်းများကို granulator သို့ပို့လိမ့်မည် (rotary drum granulator, သို့မဟုတ် roll extrusion granulator နှစ်ခုလုံးဤနေရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်)
4. အရွယ်အစားခြောက်သွေ့ခြင်းခြောက်သွေ့ခြင်း: အမှုန့်ကိုခြောက်သွေ့စေသည့်အရာထဲသို့ထည့်ပါ။ အမှုန်များအတွင်းရှိအစိုဓာတ်ကိုခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။ သို့မှသာအမှုန်များစွမ်းအားတိုး။ သိုလှောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။
5. Granulation အအေး: ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်, granulation ရဲ့အပူချိန်မြင့်မားလွန်းခြင်းနှင့် granulation စုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ အအေးပြီးနောက်, သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ထုပ်ပိုးရန်လွယ်ကူသည်။
အမှုန်ခွဲခြားခြင်း - အအေးခံသည့်အမှုန်များကိုအဆင့်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ အရည်အချင်းမရှိသောအမှုန်များကိုကြိတ်ခွဲပြီးပြန်လည်ခွဲထုတ်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များကိုထုတ်ယူလိမ့်မည်။
7. အပြီးသတ်ရုပ်ရှင်: အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန် granules ၏တောက်ပမှုနှင့်ပတ်ပတ်လည်တိုးမြှင့်ဖို့ coated နေကြသည်။
8. ချောထုတ်ကုန်၏ထုပ်ပိုးခြင်း: ရုပ်ရှင်ကိုပတ်ရစ်သောအမှုန်များကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
Organ / Compound Fertilizer Granulator စက်၏ Disc / pan ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
၁ ။ အဆိုပါစက်ဝိုင်း granulation စက်တစ်ခုလုံးကိုမြို့ပတ်ရထားကို arc ဖွဲ့စည်းပုံကိုချမှတ်, granulation နှုန်းကိုကျော် 95% အထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
2. granulation ပန်းကန်၏အောက်ခြေတွင်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ဘယ်တော့မှပုံပျက်သောနေသောဓါတ်ရောင်ခြည်သံမဏိပြားများဖြင့်အားဖြည့်သည်။
၃။ မာကြောသောသံမဏိပြားများ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
4. ကုန်ကြမ်းကျယ်ပြန့်သက်ဆိုင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ပေါင်းစပ်သောဓာတ်မြေသြဇာ၊ ဆေးဝါး၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အစာ၊ ကျောက်မီးသွေး၊
၅။ စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း။ စက်၏စွမ်းအားသည်သေးငယ်ပြီး၊ granulating ဖြစ်စဉ်တလျှောက်လုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမရှိ, စစ်ဆင်ရေးတည်ငြိမ်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင်ပြေပါတယ်။
Disc / Pan Organic & Compound Fertilizer Granulator Model ရွေးချယ်ခြင်း
disc အချင်း (mm)
ရဟတ်အမြန်နှုန်း (r / min)
ရှေ့သို့ Rotary စည်ဒြပ်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ Granulator
နောက်တစ်ခု: အမျိုးအစားအမျိုးအစားအော်ဂဲနစ် & ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာကြိတ်ခွဲစက်